हड्तालमा चिकित्सक, देशभर आन्दोलन, पेलेरै विधेयक पास गर्ने सत्तापक्ष तयारीमा (फोटो फिचरसहित) – Health Post Nepal
२०७५ माघ ११ गते ९:०२
एकातिर डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जोखिमपूर्ण बन्दैछ । डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि चिकित्सक र अन्य नागरिक समाजले दबाब बढाउने लगेपनि सरकार सुनेको नसुन्यै गरेर अगाडि बढिरहेको छ ।
चिकित्सकहरुको साझा संस्था चिकित्सक संघले ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ भने, आवासीय चिकित्सकहरु आजैदेखि सम्पूर्ण सेवा छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नागरिक समाजले डा. केसीको माग पूरा गर्न दबाब बढाउँन आजै सामुहिक गिरफ्तारीको कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको छ ।
यसैगरी प्रतिपक्षको समेत अवरोधकाबीच सत्तापक्ष भने जसरी पनि शुक्रबारै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छ । संसदको शुक्रबारको कार्यसूचीमा एउटा मात्रै विषय चिकित्सा शिक्षा विधेयक राखेर पेश र पारित गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । देश अनशन र विधेयकको विषयलाई लिएर मुडभेडतर्फ अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
रेजिडेन्टले ओपिडी, इन्डोर, शल्यक्रिया र राउण्डसमेत नगर्ने
१७ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि दबाब दिन सरकारका पोष्ट ग्राजुयसन एवं डिएम÷एमसिएच पढाईहरु चिकित्सा संस्थामा आवासीय चिकित्सकहरु आकस्मिकबाहेकका सेवा छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदा र कालोपट्टी बाँधेर सांकेतिक विरोध गर्दा सरकारले नसुनेको भन्दै प्रमुख तीन संस्थाका रेजिडेन्टले सयूक्तरुपमा काम छोडेका हुन् ।
जसमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सेवारत नेशनल डक्टर्स एशोसिएसन (एनआरडिए), वीरलगायतक सरकारी केन्द्रीय अस्पतालमा कार्यरत रेजिडेन्ट डक्टर्स अफ न्याम्स (र्यान) र धरानमा कार्यरत जुनियार रेजिडेन्ट वेलफियर सोसाइटी सम्बन्ध चिकित्सक छन् । तीनवटै अस्पतालमा कार्यरत रेजिडेन्टको संख्या ६ सय भन्दा बढी हुन्छ ।
उनीहरुले ओपिडीसहित, शल्यक्रिया, भर्ना भएको विरामीको राउण्ड लिने र नयाँ भर्ना गर्ने कामसमेत छाडेका छन् । रेजिडेन्टको हड्तालले वीर, त्रिवि शिक्षण, धरानसँगै कान्ति, प्रसुति गृह, पाटनलगायतका अस्पतालको सेवामा समेत प्रभाव पार्छ । ती अस्पतालबाहेक न्याम्स अन्र्तगतका कार्यक्रम जोडिएका र रेजिडेन्ट खटाइरिएका अन्य अस्पताल सेवा समेत प्रभाव पर्छ ।
तीनवटै संगठनले संयुक्त रुपमा विज्ञाप्तिजारी गरी पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदा पनि नसुनेपछि बाध्य भएर अप्रिय निर्णय लिनुपरेको उल्लेख छ । एनआरडिएका अध्यक्ष डा. सुमीत पाण्डेले सेवा प्रभाविन गर्ने अवस्था नआओस् भनेर धैर्यता गरेको र सरकारको रवैयाले पछिल्लो अवस्था निम्त्याएको बताए । ‘माग पुरा गर्न तत्परताका सट्टा त सरकार दमनमा पो लागिरहेको छ’ डा. पाण्डेले भने ।
र्यानका अध्यक्ष डा. सरदचन्द्र बरालले चिकित्सकहरुलाई विरामीलाई सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भन्दा अप्रिय अवस्था केही हुननसक्ने भन्दै सरकारले त्यस्तै अवस्था निम्त्याएको सुनाए । ‘हामीले नचाहेको परिस्थिति आइपुग्यौं’ डा. बरालले भने, ‘अब कति चाँडै हड्ताल टुंग्याउने भन्ने कुरा डा. जीवन रक्षाका लागि कति चाँडै पहल हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ’
त्यसैगरी जेआरडब्लुएसका अध्यक्ष कविराज पौडेलले पनि चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका माग लिएर एउटा डक्टर जीवनमरणको दोसाँधमा हुँदा अरु चिकित्सक सेवामा खटिरहने अवस्था नरहेको बताए । ‘हामी काम छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छौं, यो हाम्रो चाहानाको विषय होइन ।’ डा. पौडेलले भने । पौडेलले एक घण्टा, २ घण्टा, तीन घण्टा काम छाड्दा पनि नभएपछि सबै काम छाड्ने अवस्था आएको बताए ।
अनशनरत डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि ठोस पहल गर्न नेपाल चिकित्सक संघले ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ । योअनुसार डा. केसीसँग सहमति नभए देशव्यापी सेवा ठप्प पार्ने संघको तयारी छ । संघले रेजिडेन्टको आन्दोलनमा समर्थन जनाइसकेको छ ।
नेशनल डक्टर्स एशोसिएसन